दैनि क प्याज खानुस्, यौ न क्षमता बढाउनुस् – Jagaran Nepal
दैनि क प्याज खानुस्, यौ न क्षमता बढाउनुस्
प्याजलाई पौराणिक युगदेखि नै का मवा सना बढाउने तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको विभिन्न धर्मग्र न्थहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्याजले यौ न दु र्बल ता समेत भगाउन मद्दत गर्दछ । धरै पुरुषमा यौ नसम्प र्कको अवधी धेरै लामो नभएको भन्ने हि नता बोधले गर्दा चर म सुखमा पुग्न नसकिरहेको अ वस्था छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि प्या ज खानु अत्यन्तै लाभदायक देखिन्छ ।
यौ नसम्प र्कमा प्या जलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? तलको तरिका पढ्नुस् र अपनाउनुस् ।
१. एउटा ठूलो प्या जको दाना लिनुहोस् र त्यसलाई चार भागमा काट्नुहोस् । हरेक भागलाई मसिनो गरी पिसेर त्यसको रस निकाल्नुहोस् । उक्त प्याजको रसमा अलिकति अदुवाको रस पनि मिसाउनुहोस् । यो प्याज र अदुवाको रसको मिश्रणलाई वैैज्ञानिकहरुले सेक्सटोनिक भन्ने गरेको पाइएको छ । मिश्रित घोललाई यौ नसम्प र्क गर्नुपूर्व विस्तारै गरेर पिउनुहोस् । यो से क्स टोनिक अत्यन्तै नमीठो हुने हुनाले तपाईंलाई बान्ता पनि आउन सक्छ । तर बे फाइदा भने हुँदैन । यसलाई दिनहुँ जसो सेव न गर्नाले टे स्टो स्टो रिनको स्तर बढ्छ । यौ नस म्प र्कको बेला लिं ग नउठ्ने, धेरैबेरसम्म स म्भो ग गर्न नसक्नेलगायतका यौ न दुर्ब लता सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या हराउँदै जान्छन् ।
२. प्याजलाई ससानो टुक्रामा काट्नुहोस् र घिउमा फ्राई गनुहोस्, फ्राई गरिएको प्याजलाई सेलाइसकेपछि चार चमच महमा मिसाउनुहोस् । र, विहानको नास्तामा यसलाई समावेश गर्नाले तपाईंलाई दिनभरी उर्जा प्रदान गर्नुका साथै यौ न सम्प र्कको अवधी समेत बढाउन मद्दत गर्दछ ।
३. प्याजलाई सलादको रपमा दैनिक खानुभो भने यसले तपाईंभित्रको टे स्टो उस्टो रल हर्मो नको मात्रा बढाँउछ । जुन हार्मोनले यौ न क्षमता बढाउने कार्य गर्दछ । प्याज ले वि र्यलाई बाक्लो बनाउने कार्य गर्दछ । दैनिक काँचो प्याज खानाले तपाईं लामो समयसम्म यौ नसम्प र्कको मजा लिन सक्नु हुन्छ ।
प्रेमिका फेल हुने डरले ब्रासहित उनकै कपडा लगाएर प्रेमीले दिए परीक्षा, यसरी खुल्यो पोल प्रेममा र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन् भनिन्छ । यो उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् अफ्रिकी मुलुक सेनेगलका एक युवकले ।उनलाई आफ्नी प्रेमिकाको यतिधेरै माया रहेछ कि प्रेमिकाको नाउँमा उनका कपडा लगाएर आफै परीक्षार्थी बनेर परीक्षा केन्द्रमा गए । तर २२ वर्षीय ती युवकको त्यो हिम्मत र जुक्ति असफल भयो । केटीको पहिरनमा प्रेमिकाको साटो परीक्षा दिन गएका उनी पक्राउ परिहाले ।
उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा वास्तविक पोल खुल्यो । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीलाई लिएर उनी आफ्नो प्रतिक्षामा रहेकी १९ वर्षीया प्रेमिकासामू पुगे । प्रहरी तथा प्रेमिकाको अगाडि उनले अनुनय गर्दै आफूले प्रेमिकाको मायामा डुबेर यस्तो जोखिम उठाएको बताए ।उक्त प्रेमजोडीमाथि परीक्षामा नक्कल गरेको तथा ठगी गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
यसैगरी हर्रोको सानो टुक्रा मुखमा चपाएर राख्दा मुखभित्र आएको घाउ, खटिरा आदि निको हुन्छ । यो खाएमा भोक नलाग्ने समस्याबाट समेत राहत मिल्छ । नियमित हर्रो खाएमा पेट सफा हुन्छ । एसिडिटी बढ्ने, पेटमा ग्यास भरिने र कब्जियत हुने समस्याबाट बचाउँछ । हर्रोको चूर्ण कालो नुनसँग मिलाएर खाँदा कफ निको हुन्छ । त्यस्तै, हर्रोले अनावश्यक बान्ता आउनबाट पनि रोक्छ ।
१. बायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भई हाल्छ । बचत गर्न सक्दैनन् । २. तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ । तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने कामुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ । ३. बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।
४. बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । ५. चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् । ६. हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई पैसा हात लागेपनि बचत हुँदैन ।
याे पनि बलिउड कि यी चर्चित अभिनेत्रीले किन सैफलाई अ’प’हरण ग’र्न चाहन्थिन् ? खुल्यो यस्तो रहस्य एजेन्सी – बलिउड अभिनेता सैफ अली खानलाई दर्शकमात्र होइन, फिल्मकर्मी पनि उत्तिकै मनपराउछन् । अझ उनलाई मनपराउने अभिनेत्रीको संख्या उल्लेख्य नै छ । अभिनेत्री परिणीति चोपडा सैफलाई निकै मनपराउछिन् । उनी आफ्नो क्रश नै मान्छिन् । सैफप्रति परिणीतिको आशक्ति कतिसम्म छ भने उनी सैफलाई अ’पहरण ग’र्न पनि पछि नपर्ने योजनामा छिन् । ‘द कपिल शर्मा शो’को एक भागको क्लिप युट्यबुमा बलिउड गसिप गर्लको पेजले सार्वजनिक गरेको छ ।
एकपटक सैफ आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका लागि कपिलको शोमा पुगेका थिए । त्यहाँ कपिलले सैफलाई परिणीतिको त्यो क्लिप देखाइन्, जहाँ परिणीतिले सैफ प्रति आफ्नो प्रेम देखाएकी थिइन् । त्यहाँ परिणीतिले मौका मिलेमा आफूले सैफको अ’प’हरण ग’ र्ने बताएकी थिइन् । उनले आफ्नो कुरा सैफकी अभिनेत्री पत्नी करीना कपूर खानलाई पनि जानकारी भएको बताएकी थिइन् । यो भिडियो हेरेपछि कपिलले सैफसँग उनको प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए । तर सैफले केही बोल्न सकेनन् । किनकी उनीलाई के बोल्ने भन्ने समेत थाहा भएन ।